Highspeed ရထားဖြင့်ရောမမှ Paris သို့သွားပါ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > Highspeed ရထားဖြင့်ရောမမှ Paris သို့သွားပါ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 14/05/2020)
ပဲရစ်စ်နှင့်ရောမမြို့နီးပါးတိုင်းခရီးသွားမယ့်ရေပုံးစာရင်း၏ထိပ်မှာရှိပါတယ်. ဤရွေ့ကားအံ့မခန်းမြို့ကြီးများမိမိတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအဘို့အလူကြိုက်များ, ကမ္ဘာ့အတန်းအစားအစားအစာ, လက်ရာမြောက်သော ဗိသုကာအတတ်ပညာ ဒါအများကြီးပို. ရောမမြို့နှင့်ပဲရစ်ဝေးဆိတ်ကွယ်ရာများမှာနေစဉ်, သူတို့ကောင်းကောင်းရှိပါတယ် ရထားချိတ်ဆက်. ဒီအသင်တို့သည်ဤအကြားရွေးချယ်ဖို့မလိုပါဆိုလိုတယ် ခမ်းနားမြို့ကြီးများ, သင်သည်ထိုသူတို့နှစ်ဦးစလုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်! သင်ဤစေရန်ကူညီပေးဖို့ ခရီးသွားခြင်း တတ်နိုင်သမျှပျော်စရာအဖြစ်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေ Highspeed ရထားဖြင့်ရောမမွ Paris သို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ.
သင်သာမြန်နှုန်းမြင့်ဆက်သွယ်မှုကို အသုံးပြု. ပြင်သစ်နှင့်အီတလီမှတဆင့်မြန်ဆန်နိုင်ပါတယ်. ပဲရစ်မှရောမမြို့ကနေခရီးသွားလာရန်အလျင်မြန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးအဆင်ပြေနည်းလမ်းတွေတ Thello ယူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် မြန်နှုန်းမြင့်ရထား. ဤသည်ခေတ်ပြိုင်ရထားအချိန်မအတွက်ပဲရစ် whisk ပါလိမ့်မယ်. ပဌမ, အမြန်နှုန်းမြင့်ရထားကိုရောမမြို့မှမီလန်၊ မီလန်ကိုပါရီမြို့သို့အမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများဖြင့်သွားလိမ့်မည်. ဒီခရီးစဉ်များအတွက်ခရီးသွားအချိန်ကွဲပြားခြားနားသည်, အရာမီးရထားပေါ် မူတည်. သင်ကောက်. ငါတို့သည်သင်တို့ရပါမည်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုကြိုတင်သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံစာအုပ်ဆိုင်အကြံပြု ဤအရထားများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ် တစ်ဦးထိုင်ခုံလုံခြုံရေးအတွက်.
လိုင်ယွန်မှ Nice ရထားကြိမ်
သာယာလှပလမ်းကြောင်းကိုယူ – Highspeed ရထားအားဖြင့်ပဲရစ်မှရောမ
သင်ရောမမြို့မှပဲရစ်သို့အမြန်ရထားဖြင့်ရထားစီးသည့်လမ်းကြောင်းပေါ် မူတည်၍ သွားသည်, သင်လမ်းတလျှောက်တွင်ပြင်သစ်၏လှပသောမြို့တစုံတမြို့သို့ရှာဖွေစူးစမ်းပျော်မွေ့ချင်ပေလိမ့်မည်. nice ၏ဘုနျးကိုတက် soaks Provence နှင့်ရှယ်ယာ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မှတဆင့် ကမ်းခြေ, ကျယ်ပြန်လမျးလြှောကျသှားခွငျးနှင့် Open-လေကြောင်းရန် စျေးကွက်. Nice မှာပယ်ရပ်တန့်သငျသညျပြင်သစ်၏အခြားရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုမြင်ရဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်နှင့်ကြင်ရောမမြို့ကနေပဲရစ်ရန်သင့်ခရီးကိုတက်ချိုးမည်.
ဒေသဆိုင်ရာရထားသုံးပြီးနှင့်အခြားထဲမှာပယ်ရပ်တန့်ဖြင့်သင့်လွတ်လပ်ခွင့်အရှိဆုံး Make ဥရောပမြို့ကြီးများ. မီလန်မှရောမမြို့ကနေခရီးသွား, ဂျနီဗာပေါ်ကိုသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိဖို့မရောက်မီ – ပဲရစ်.
အဘယ်သူမျှမ မီးရထားခရီးသွားလာ လေးနာရီကျော်ရှည်. ဒီရှည်ရထားစီးနှစ်သက်မှုမရှိတဲ့သူမဆိုစွန့်စားဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလမ်းကြောင်းစေသည်. အချို့သောမြို့ကြီးများအခြားသူများထက်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ပိုစျေးကြီးဖြစ်ကြောင်းစိတျထဲတှငျထမ်းကောင်းသောကြောင့်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ပေါ်မူတည်ပြီးသင်တစ်ဦးပိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါ, ခရီးစဉ် ကျနော်တို့စာရင်းရှိသည်ဟုမြို့ရှိသမျှမပါဝင်ပါဘူး. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရှုပါ၊ သင်သည်အမြန်ရထားဖြင့်ရောမမှပဲရစ်သို့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဖြင့်သွားရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခရီးစဉ်ကိုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ပဲရစ်မှရောမသို့ရထားလမ်းတစ်ခုတည်းဖြင့်ပင်ရနိုင်သည်။. သင်တို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ပရိုမိုးရှင်းနှင့်အတူနေ့စွဲအထိထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် Facebook က, တွစ်တာ နှင့် Instagram ကိုစာမကျြနှာ.
ပဲရစ်မှရောမမြို့ကနေဒီလမ်းကြောင်းကိုအောင်အကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစား? ကိုသွားပါ SaveATrain အွန်လိုင်း အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းစစ်ဆေးနှင့်သင်၏နောက်စွန့်စားမှုစီစဉ်စတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-get-from-rome-to-paris-by-train%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / nl သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / က de ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#Geneva ရိုးမား ရထားခရီးသွား travelnice travelparis travelrome